बुधबार, साउन २०, २०७८ ०३:२५:१३ युनिकोड
शरीरमा भिटामिन डीको कमी हुँदा देखिने ५ संकेत यस्ता छन् बिहीबार, साउन १४, २०७८
ग्याष्ट्रिक के कारणले हुन्छ ? यसको लक्षणहरु,कारण र व्यवस्थापन गर्ने उपाय बिहीबार, असार २४, २०७८
मृगौला रोग सम्बन्धी बुझनै पर्ने कुराहरु !! कारण, लक्षण तथा बच्ने उपाय मृगौला भनेको शरीरको पेट पछाडि ढाडको दुवैतिर रहेको दुईवटा अति महत्वपूर्ण अगं हो । रगतमा भएको फोहोर पिसावबाट फालेर रगत सफा राख्दछ । यसले रगतमा भएको नुन र खनिज पदार्थ सन्तुलनमा राख्दछ । यसले रक्तचाप सन्तुलनका लागी पनि महत्वपूर्ण कार्य गर्दछ । हृदयघात, मुटुरोग, अत्याधिक मदिरा सेवन, उच्च रक्तचाप लगायत अन्य रोगका कारण मृगौलाले काम गर्न सक्दैन् । सोमबार, असार २१, २०७८
तपाईंका ४ बानी, जसले गर्न सक्छ मृगौलालाई हानी नै हानी मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो मृगौला । हाम्रो रगतमा भएको बिकारलाई पिसाबका माध्यमबाट बाहिर फ्याक्ने र शरीरलाई स्वस्थ राख्न मृगौलाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मृगौलाले रगतको विकारलाई छान्ने, त्यसलाई शुद्ध र शरीरको लागि उपयोगी बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ । सोमबार, असार २१, २०७८
किन पिउँने अदुवा चिया ? यस्ता छन् १२ फाइदा सोमबार, असार २१, २०७८
यस कारण देखा पर्छ महिलामा यौनांग चिलाउने रोग, यस्तो छ कारण र समाधान शुक्रबार, असार १८, २०७८
बिहान खाली पेटमा चिया खानाले स्वास्थ्यमा गर्छ यो ४ हानी नेपालीहरुको संस्कार भित्र पर्छ चिया । सामान्यतया कोहि मानिससँग भेट्दा चिया प्यूने गरिन्छ । अझ कतिपय मानिस त चियाका पारखी हुन्छन् । दिनमै ८/१० कप सम्म पनि चिया पिउने गर्द छन्। शुक्रबार, असार १८, २०७८
लामो समय यौनसम्पर्क कायम राख्न लगाउनुहोस निम्न उपाय बुधबार, असार १६, २०७८
तपाईंलाई मुसा आएको छ ? यसरी अपनाउनुहोस् ५ सावधानी मुसा एक किसिमको भाइरल संक्रमण हो । मुसालाई अंग्रेजीमा वाट्र्स भनिन्छ । ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसका कारण मुसा आउँछ । एचपिभीको सयौं प्रजातिले विभिन्न प्रकारका मुसा शरीरको विभिन्न ठाउँमा निकाल्छन् । बुधबार, असार १६, २०७८
यस कारण दोहोर्‍याएर यौन सम्बन्ध राख्न मन लाग्छ ! यौन चाहना हामीलाई प्रकृतिले दिएको एक विशेषता हो र सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौन चाहना हुन्छ । यो हाम्रो वंश निरन्तरताका लागि आवश्यक छ । यौनसम्बन्धी हाम्रा चासो तथा चाहनाहरू मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छन् । मस्तिष्कको Hypothalamus भन्ने सानो अंगले यौनसम्पर्क राख्ने जस्ता आधारभूत व्यग्रता प्राणीमा उत्पन्न गर्छ भने अर्को अङ्ग CerebralCortex ले हामीले सिकेका कुरा तथा अनुभवहरूलाई अभिलेख राख्ने कार्य गर्छ । बुधबार, असार १६, २०७८
यस्ता छन् दही र चिउरा खानुका फाईदा दही–चिउरा फास्टफुड हुनुका साथै स्वस्थकर एवं पोषकतत्वहरूले भरिपूर्ण भएकाले दही–चिउराको महत्व हिजो, आज र भोलि सधैं उत्तिकै छ । पौष्टिकताका हिसाबले दही सबै किसिमका पोषक तत्व भएको अमृत खाद्य हो । घरेलु विधिले तयार गरिएको १ सय मिलिग्राम दहीमा ८८ प्रतिशत पानी, ३ दशमलव ५ ग्राम प्रोटिन, ४ दशमलव ७ ग्राम कार्बोहाइड्रेड तथा ३ दशमलव ३ ग्राम चिल्लो पाइन्छ भने यी सबै तत्वको उपपाचन हुँदा ६१ किलो क्यालोरी उर्जा प्राप्त हुन्छ । बुधबार, असार १६, २०७८
मंगलबारको दिन किन गर्ने भगवान श्रीगणेशको पूजा ? यस्ताे छ धार्मीक मान्यता आज मंगलबार । मंगलबार भगवान गणेशको पूजा अर्चना र व्रत बस्दा फाइदा पुग्ने हिन्दू धर्म शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि शुभ कार्यको सुरुवात गर्दा सबैभन्दा पहिले भगवान गणेशको पूजा गरिन्छ। मंगलबार सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुद्ध मनले भगवान श्रीगणेशको पूजा गर्नु उत्तम मानिन्छ। मंगलबार व्रत बसेर पूजा आराधाना गर्नाले मनोकामना पूरा हुने धार्मीक विश्वास छ। मंगलबार, वैशाख १४, २०७८
तपाईंलाई पनि मुख सुक्खा हुने समस्या छ? यस्ता छन् कारण मुख सुक्खा हुने अवस्था आफैंमा रोग होइन । यसले शरीरको अर्को कुनै अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ । तसर्थ, मुख सुक्खा हुने समस्या देखा परेमा लापरवाही नगरिकन चिकित्सकलाई देखाउनु राम्रो हुन्छ । बुधबार, फागुन १९, २०७७
पिसाब पोल्ने वा दुख्ने समस्या छ ? यस्तो छ, कारण र घरेलु उपचार शरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थ पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छन् । पिसाब पोल्नु र पिसाब गर्दा पीडा हुनुजस्ता समस्याले अन्य धेरै रोगको संकेत गर्छ । पिसाब पोल्ने समस्या भएमा मूत्राशयमा पीडा हुने, पिसाब दुर्गन्धित हुने, पिसाबको रङ गाढा पहेँलो हुने, थोरै–थोरै पिसाब पटक–पटक आउनेजस्ता समस्या हुने गर्छन् । बुधबार, फागुन १९, २०७७